China Carbopol 981 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Igama: ICarbomer 981 iCarbopol 981
ICarbomer 981 Carbopol981 yipolyacrylate Polymer enqamleza umnqamlezo. Isebenza ngokufanayo neCarbomer 941. kodwa ifakwe ipolymer kwi-co-solvent system ye-ethyl acetate kunye necyclohexane.
Ukusasaza iCarbomer941 ngokupheleleyo, kufanele ukuba icothwe ngokucokisekileyo kwaye ihluzwe ngononophelo ukusasazeka phakathi ngelixa umxube unyanzeliswa ngokukhawuleza ukunqanda ukwenziwa kwamaqhuma; Umxhubi wezinga eliphezulu kakhulu lokucheba kufuneka aqeshwe ngononophelo ukuthintela ukulahleka kwe-viscosity.
I-viscosity efanelekileyo inokufezekiswa kumanqanaba e-5.0 ~ 10.0; Ukufezekisa ukuqina okuphezulu, iCarbomer941 kufuneka ithathelwe ngaphandle; Kwinkqubo ye-hydoalcoholic, kufuneka kukhethwe ngononophelo oluchanekileyo ngokusekwe kwinani lotywala ekufuneka lifakwe kwijeli.
Isebenza ngokuxinana okuphantsi kakhulu - i-0.1-0.5%, ithathe indawo yedosi yesiko ye-3-7%
Ayikhawulelwanga lixabiso le-HLB kunye ne-PLT
Inokumisa nayiphi na ioyile engamanzi kubushushu begumbi
Ukuba i-wax iyanyibilika kwinkqubo yokuvelisa, ii-wax zinganyanzeliswa
I-emulsions ezinzileyo inokulungiswa ngokunika umdlalo opheleleyo ekumanzeni, ekusasazeni nasekubambeleleni kwabasebenza ngokudada
Kulula ukulungiselela i-emulsion engenamanzi ngaphandle kwearhente yokwenza ifilimu
Inokunyibilikisa isigaba seoyile ephezulu emanzini ukuze yenze (O / W) i-emulsion
Inokulungiswa: i-cream yokuthambisa, into yokuthambisa, iimveliso zokucoca ilanga, isiqholo esingena tywala, i-flavour conditioner (i-gloss eyandisiweyo, kulula ukuyikama), iarhente yokuhlamba izandla, ukungqinisisa okuphantsi kwe-emulsion kunye ne-microemulsion ebonakalayo. Zininzi iindlela zokunciphisa ubunzima besicelo se-carbomer. Enye indlela kukongeza i-carbomer kwinkqubo yeoyile ukunciphisa isantya sokudumba, esibizwa ngokuba yindlela engathanga ngqo, kodwa kuxhomekeke kwifomula. ICarbomer ayithinteli kangako kutshintsho kwinkqubo yokongeza.
Egqithileyo ICarbopol 980
Okulandelayo: ICarbopol 990